Ekipa Blue Flag miaraka amin'ny ENAT hampiroborobo ny hetsika amoron-dranomasina, Marinas ary hetsika miorina amin'ny sambo ho an'ny rehetra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ekipa Blue Flag miaraka amin'ny ENAT hampiroborobo ny hetsika amoron-dranomasina, Marinas ary hetsika miorina amin'ny sambo ho an'ny rehetra
Fizahan-tany azo idirana • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Fanambarana ho an'ny mpanao gazety • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Foundation for Education tontolo iainana, amin'ny alalàn'ny fanamarinana Blue Flag, ekena hatry ny ela ho fari-dranomasina maharitra ho an'ny morontsiraka, marina ary hetsika miorina amin'ny sambo manerana izao tontolo izao, dia nanao sonia fifanarahana tamin'ny ENAT - The European Network for Accessible Tourism non-profit profit to hiara-hiasa hampiroborobo ny fidirana amin'ny mpitsidika rehetra ny morontsiraka, marinina ary ny hetsika miorina amin'ny sambo.
Raha ny fenitra Blue Flag dia efa misy fepetra takiana mifandraika amin'ny fahazoana miditra amin'ireo sembana, ireo mpiara-miombon'antoka kosa dia manaiky fa ny toerana itodiana dia afaka manao zavatra bebe kokoa hanatsarana ny traikefa amoron-dranomasina, marina ary avy amin'ireny sambo ireny, ary tokoa, ny mpitsidika rehetra amin'ny fanomezana teknika sahaza azy fepetra sy fanampiana, raha ilaina.
ENAT dia hizara ny traikefa ananany amin'ny fizahan-tany azo idirana miaraka amin'ny Blue Flag International / Foundation for Environmental Education (FEE), izay niasa tao anatin'ny folo taona lasa mba hampahafantatra, hanao fikarohana ary hamolavola vahaolana hahazoana fidirana tsara ho an'ny rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahantany.
Ny mpiara-miombon'antoka, mpanjifa ary mpikambana ao amin'ny ENAT dia misy ny Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany, ny komisiona eropeana, parlemanta eropeana, ISO, tompon'andraikitra fizahan-tany nasionaly sy isam-paritra, orinasam-pizahan-tany ary fikambanan'ny olona manana fahasembanana.
Taorian'ny nanasoniavany ny Memorandum of Understanding dia nilaza ny talen'ny mpisolo toerana Blue Flag International, Johann Durand:
“Ireo toerana hitazomana ny sainam-pirenen'i Blue dia nanaiky ny fanamby ary nanana fiheverana tsara hanao tsara kokoa, na ho an'ny tontolo iainana na ho an'ireo mpitsidika azy ireo. Ny fidirana dia sehatra iray lehibe ilana torohevitra tsara - ho an'ny drafitra fotodrafitrasa amin'ny fomba mora tohina sy mahomby ary amin'ny fanomezana serivisy hiantohana ny fahasalamana, fampiononana ary fiarovana ny mpitsidika miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fidirana. Hitanay ny fiaraha-miasa vaovao ataonay amin'ny ENAT ho toy ny dingana iray tsara hanatrarana ny fampidirana tanteraka - tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny fampiharana any amin'ny toeran-tsika rehetra. ”
Hoy ny filohan'ny ENAT, Anna Grazia Laura:
“Tena reharehantsika ary faly izahay nandefa ny fiaraha-miasa amin'ny Blue Flag. Fahitana iraisanay fa ny fidirana dia olana manerantany, izay tsy maintsy atao lohalaharana amin'ny toerana fizahan-tany sy ny fiarahamonina rehetra. Manantena ny fanaparitahana ity hafatra ity izahay ary aseho, miaraka amin'ny ohatra tsara maro, ny fomba ahafahan'ny fianakaviana, zokiolona, ​​olona manana fahasembanana na amin'ny toe-pahasalamana maharitra - tokoa, ny mpitsidika sy ny olom-pirenena rehetra - dia afaka mahazo tombony amin'ny traikefa nahafinaritra amin'ny tontolo amoron-dranomasina sy amoron-dranomasina. Ekenay ny lazan'ny Blue Flag amin'ny fitarihana manam-pahefana sy ara-teknika amin'ity sehatra ity ary manantena izahay ny hanohana ny fototra sy ny tambajotran'izao tontolo izao mifandraika amin'ny politika, fenitra ary fanabeazana. ”